Ny zodiak amin'ny fifohazana dia miitatra amin'ny homamiadana amin'ny alàlan'ny libra ka capricorn; ny zodiaka matory hatramin'ny capricorn ka hatramin'ny kansera.
Vol. 6 NOVAMBRA, 1907. Tsia
Ny SLEEP dia zavatra iray mahazatra izay tsy fahita firy na tsy heverintsika akory ny fisehoan-javatra mahatalanjona ary tsy ny ampahany tsy hita ao anatiny. Lany eo ampahatelon'ny fiainanay ao anatin'ny torimaso izahay. Raha niaina enimpolo taona izahay dia nandany ny roapolo taona tao anatin'io fotoana io tamin'ny torimaso. Rehefa zaza dia nandany mihoatra ny ampahatelon'ny efatra amby roapolo ora natory izahay, ary toy ny zaza dia natory nandritra ny antsasaky ny andronay.
Ny zavatra rehetra isaky ny departemanta sy ny fanjakan'ny natiora dia matory, ary tsy misy na inona na inona ambanin'ny lalàn'ny natiora tsy mahavita torimaso. Ny natiora dia matory. Ireo tontolo, lehilahy, zavamaniry ary mineraly dia mitaky torimaso mba hahafahan'izy ireo hitohy. Ny vanim-potoana fatoriana dia ny fotoana mampiavaka ny tenany amin'ny zavatra atao amin'ny fifohazany. Amin'ny vanim-potoana fatoriana dia manamboatra ny fahasimbana ateraky ny taovany amin'ny alàlan'ny fikoroporahana mahery vaika, sy ny fitafy sy ranomaso fiainana.
Tsy manenina isika matory noho ny tombontsoa lehibe azontsika avy amin'izany. Matetika isika manenina ny fotoana lanintsika amin'ny torimaso toy ny lany andro; kanefa, raha tsy natory, dia tsy tokony ho afaka hitondra ny raharaha eo amin'ny fiainana ihany isika, fa tokony ho very ny tombontsoa lehibe izay azontsika avy amin'ny sehatra tsy hita maso izay zara raha fantatsika.
Raha mianatra mandry bebe kokoa isika, fa tsy manala ny fotoana very, na mandefitra azy ho ratsy dia ilaina, dia tokony ho lasa fifandraisana akaiky kokoa amin'ity tontolo tsy hita maso ity isika noho izay misy antsika ankehitriny, ary izay tokony hianarantsika dia hanazava. maro amin'ireo zava-miafina momba ity fiainana ara-batana ity.
Ny fanaovan'ny torimaso amin'ny torimaso sy ny fifohazana dia tandindon'ny fiainana ary ny fanjakana aorian'ny fahafatesana. Ny fiainana mamoha ny andro iray dia tandindon'ny fiainana iray eto ambonin'ny tany. Mifoha amin'ny torimaso alina ary miomana amin'ny asan'ny andro dia mifanentana amin'ny fahazazana sy ny fiomanana amin'ny asan'ny fiainana. Avy eo dia tonga ny tombontsoany, ny adidy sy ny andraikitry ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-barotra, ny maha-olom-pirenena ary ny fireneny, ary amin'ny fahanterana. Aorian'io dia tonga ny torimaso lava amin'izay antsointsika ankehitriny hoe fahafatesana, fa raha ny marina dia ny fitsaharana sy fiomanana amin'ny asan'ny fiainana hafa, na dia ny torimaso aza manomana antsika amin'ny andro ho avy. Amin'ny torimaso lalina dia tsy mahatadidy na inona na inona amin'ny andro niainany isika, ny fikarakarana ny tena, ary tsy mandra-pahatongan'ny hiverenan'ny fiainana dia raisina indray ireo fiahiana ireo. Isika maty amin izao tontolo izao rehefa ao anaty torimaso lalina toy ny vatana tao anaty fasana na tonga lavenona.
Izay mampifandray antsika isan'andro na endrika isehoan'ny vatana, izay aharihary ny fahatsiarovana ny andro teo aloha. Ka rehefa avy natory isika dia mahita ireo sary na fahatsiarovana miandry antsika eo amin'ny faravodilanitry ny fiainana, ary ny fahafantarana azy ireo ho toy ny tenantsika dia manohy ny fananganana sary. Ny fahasamihafana amin'ny fahafatesana sy ny torimaso mifandraika amin'ity izao tontolo izao dia ny mahita ny vatana miandry antsika amin'ny fiverenantsika eto amin'izao tontolo izao aorian'ny fatoriana, fa rehefa maty kosa dia mahita vatana vaovao izay tokony hampiofanana sy hivoatra fa tsy miomana ho amin'ny maika ampiasaina.
Ny atoma, molekiola, sela, taova ary vatana voalamina dia samy tokony hanana fitsaharana sy fialan-tsasatra izy ireo mba hitohizan'ny fandaminana manontolo. Ny tsirairay dia tsy maintsy manana ny fotoany fitsaharana araka ny fiasa ao aminy.
Ny zava-drehetra eto amin'izao rehetra izao dia mahatsiaro, saingy ny zava-drehetra dia mahatsiaro tena amin'ny fiaramanidina, ary arakaraka ny haavon'ny asany. Ny vatan'olombelona manontolo dia manana fitsipi-pinoana izay mandrindra, manohana ary manosika ireo taova sy ny faritra ao amin'ny vatana. Ny taova tsirairay dia manana fitsipi-pinoana izay mitazona sy mampiditra ny sela ao aminy. Ny sela tsirairay dia manana fitsipika mahatsiaro izay mitazona ireo molekiola ao anatin'ny faritra manodidina azy. Ny molekiola tsirairay dia manana fitsipika fahatsiarovan-tena izay manintona ireo atody avy amin'ireo singa ireo ary mampifantoka azy ireo. Ny atiny tsirairay dia manana fitsipika mahatalanjona izay ilay fanahin'ny singa izay misy azy. Saingy ny atomika dia mahatsiaro ho toy ny ataoma raha tsy miasa toy ny ataom-pijanonan'ny atody araka ny karazana atiny, ary eo amin'ny singa atomika izay anisany. Ohatra, ny fiaramanidina ny fahatsiarovan-tena momba ny atody karbonina dia ny foto-kevitr'ireo singa, fa ny karazana fianaovan-tsain'ilay singa dia karbonina, ary ny mari-pahaizana ho toy ny fitsipika an-tsaina iray dia mifanaraka amin'ny fiasa ao aminy. hetsika ho singa karbonina. Koa asio ny singa rehetra ao aminy fa ny foto-keviny manokana izay ilay fanahin'ny singa. Raha mbola mijanona ao anatin'ny singa azy ny atody dia tarihin'ny fitsipika ao an-tsaina izay misy azy, fa rehefa mifangaro amin'ny atomin'ny singa hafa kosa dia voafehin'ny fitsipika mitambatra hafa tsy mitovy aminy, kanefa toy ny ataoma karbonina dia manatanteraka ny fiasan'ny karbonina.
Ny atôma dia ny singa tsy azo ovaina amin'ny resaka fanahy izay mifangaro arakaraka ny foto-kevitra hamolavola na endrika iray. Ny fitsipiky ny molekiola iray miasa toy ny endrika na endrika. Ity fitsipiky ny famolavolana na endrika io dia manintona ireo atody ilaina amin'ny famolavolana azy, ary ny atoma, izay samy mihetsika araka ny toerany na ny foto-pinoana anisany, dia mankatoa ny lalàn'ny mahasarika ary ny tsirairay dia miditra ao amin'ny fitambatra sy ny famolavolana, tarihiny ary raisina mifantoka amin'ny ny fitsipiky ny molekiola. Ity no fitaomana manjaka mandritra ny fanjakam-pirenena mineraly, izay no dingana farany avy amin'ny tontolon'ny vatana tsy hita maso ka hatrany amin'ny tontolo hita maso hita maso ary ny dingana voalohany miakatra amin'ny vatana hita maso. Ny fitsipiky ny famolavolana na ny endriny dia hijanona ho mitovy hatrany raha tsy amin'ny fitsipiky ny fiainana, ny fiasan'ny fivoarana, ny fitomboana. Ny fitsipiky ny fiainana miaina mihazakazaka amin'ny molekiola ary mahatonga azy hivelatra sy hitombo, noho izany dia mivoatra tsikelikely ny endrika sy ny famolavolana ny molekiola ho lasa endrika sy endrika ny sela. Ny fiasan'ny fitsipiky ny sela dia fiainana, fanitarana, fitomboana. Ny fitsipiky ny taova iray dia faniriana. Io faniriana io dia mitambatra ireo sela, mitarika ny zava-drehetra izay eo ambany fahefany ary manohitra ny fiovana rehetra ankoatra ny fihetsika nataony. Ny fiasan'ny fitsipika mahatsiarin'ny taova rehetra dia ny faniriana; ny taova tsirairay dia mihetsika araka ny fitsipika fanta-keviny ary manohitra ny fihetsiky ny taova rehetra, ka, toy ny amin'ny ataon'ireo atody samy hafa izay miara-miasa eo ambanin'ny foto-kevitry ny molekiola izay namolavola azy ireo, dia misy ankehitriny mandrindra ny fitsipiky ny saina momba ny endriky ny vatana, izay mitazona ireo taova rehetra mifandraika amin'ny tsirairay avy. Ny fitsipiky ny fomban'ny saina mifandrindra amin'ny maha-vatana manontolo dia manjaka ny taova ary manery azy ireo hiara-hiasa izy ireo, na dia samy manaraka ny fitsipiky ny saina ihany aza ny tsirairay. Ny taova tsirairay dia mihazona ireo sela izay iangonan'izy ireo, ny sela tsirairay dia manao ny asany misaraka amin'ny taova. Ny sela tsirairay dia mifehy ny molekiola ao anatiny; ny molekiola tsirairay dia mitazona ireo atody izay ifantohana io, ary ny atody tsirairay dia miasa araka ny fitsipiky ny saina tarihiny, izay no singa izay anjarany.
Noho izany dia manana vatan'olombelona iray isika, anisan'izany ny fanjakana rehetra amin'ny natiora: ny singa izay asehon'ny atoma, ny molekiola mijoro ho mineraly, ny sela mitombo ho legioma, ny taova mihetsika ho biby, ny tsirairay avy araka ny toetrany. Ny fitsipiky ny saina tsirairay avy dia tsy mahalala afa-tsy ny fiasan'izy ireo. Ny atiny tsy mahatsapa ny fiasan'ny molekiola, ny molôkla tsy mahatsapa ny fiasan'ny sela, ny sela dia tsy mahalala ny fiasan'ny taova, ary ny zavamanana dia tsy mahatakatra ny fiasan'ny fikambanana. Amin'izay dia hitantsika avokoa ireo fitsipika mahatsiaro tena izay mandeha tsara amin'ny fiaramanidina tsirairay.
Ny vanim-potoana fialan-tsasatra amin'ny atim-potoana dia ny fotoana iray tsy hiasany intsony ny fitsipiky ny molekiola iray ary manafaka ny atiny. Ny fotoam-pialan-tsasatra ho an'ny molekiola dia tonga rehefa esorina ny fitsipiky ny fiainana ary tsy miasa intsony ary rehefa esorina ny fiainana dia mijanona ho toy ny azy ny molekiola. Tonga ny fotoana fitsaharana ho an'ny sela iray rehefa tsy mitsahatra ny fanoherana ilay fitsipiky ny faniriana. Ny vanim-potoana sisa amin'ny taova iray dia ny fotoana manafoana ny asany ny fitsipiky ny fandrindrana ao amin'ny vatana ary mamela ny taova tsirairay hihetsika araka ny fombany, ary ny fialan-tsasatra ho an'ny endrika mandrindra ny vatana rehefa tonga ny foto-pandrindran'ny olona. miala avy amin'ny fifehezana ny vatana ary mamela azy miala sasatra amin'ny faritra rehetra ao.
Ny torimaso dia fiasa voafaritra tsara momba ny fitsipika fanta-tsaina manokana izay mitarika ny maha-izy na ny zavatra iray ao amin'ny fanjakan'ny natiora. Ny torimaso dia ny toe-piainana na ny toetry ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena izay, tsy mijanona ny fiasa eo amin'ny fiaramanidina irery ihany, dia manakana ny fihetsika tsy hihetsika.
Ny torimaso dia ny maizina. Ao amin'ny olombelona, ​​matory na maizina, dia ny asan'ny saina izay manitatra ny heriny amin'ny fiasa sy fahaiza-manao hafa ary manakana ny fihetsik'izy ireo.
Raha ny saina izay fitsipika fototry ny saina ara-batana dia mihetsika amin'ny alàlan'ny vatana iray, ny faritra rehetra amin'ny vatana, ary amin'ny fitambarany, dia mamaly ny fisainan'ny saina, kanefa na dia manjaka aza ny saina. ny fahaiza-manaon'ny saina sy ny saina dia ampiasaina ary ny valiny rehetra amin'ny mpanompo ao amin'ny vatana dia tokony hamaly. Fa ny vatana ihany no afaka mamaly vetivety.
Tonga ny torimaso rehefa reraka sy tsy sasatry ny fizotran'ny vatana ny departemanta samihafa amin'ny vatana ary tsy afaka mamaly ny firafitry ny saina, ary noho izany ny fiasan'ny saina izay torimaso dia alaina. Ny foto-kevitra fanjohian-kevitra avy eo dia resy ny fahaizany. Tsy mahavita mifehy ireo fihetseham-po ara-batana ireo fahaiza-miaina, mitsahatra tsy mihazona ireo taova ireo fahatsapana ara-batana, ary milentika ao anaty alahelo ny vatana. Rehefa ny fitsipiky ny saina tsy mihetsika intsony amin'ny alàlan'ny fahendren'ny saina ary miala amin'ny sahaniny, dia natory ny torimaso ary tsy mahalala ny tontolon'ny adala ny saina. Amin'ny torimaso, ny fitsipiky ny olombelona dia mety ho maizimaizina sy rakotra amin'ny tsy fahalalàna maizina na mety ho mihetsika amin'ny fiaramanidina ambony noho ny fiainana mahatsikaiky.
Ny antony mahatonga ny fanalana ny foto-pinoana dia ho jerena amin'ny fandalinana ny fizotran'ny torimaso. Ny molekiola tsirairay, sela, sela ny vatana sy ny vatana iray manontolo dia samy miasa ny asany tsirairay; fa ny tsirairay dia tsy afaka miasa mandritra ny fe-potoana iray fotsiny, ary ny vanim-potoana iray dia voafaritry ny adidin'ny tsirairay. Rehefa manakaiky ny vanim-potoanan'ny fiasana dia tsy afaka mamaly ny hery manjaka any amboniny, ny tsy fahafahany miasa dia manambara ny fitarihan'ny tsy fahaizany sy ny fitaoman-dry zareo ka mampihatra ny fitsipika mibahana ao an-tsaina. Ny tsirairay mihetsika araka ny toetoetrany manokana, ny atoma, molekiola, sela ary taova ao amin'ny vatan'ny biby, dia manondro ny foto-kevitra mifehy ny fahatsiarovan-tena momba ny endriky ny vatana amin'ny fotoana fitsaharana araka ny voatondro ho an'ny tsirairay avy, ary avy eo. ny fitsipika mifehy ny fahatsiarovan-tena tsirairay dia manaisotra ny fitaomana azy ary avelany miala sasatra ilay eo ambaniny. Ity no mitranga amin'ny antsoina hoe matory voajanahary.
Ny fitsipiky ny maha-olombelona ny foibeny ao an-doha, na dia miitatra manerana ny vatana aza. Raha mbola mijanona ao an-doha ilay lehilahy dia tsy matory na dia tsy fantany ny amin'ny manodidina azy aza ary somary miala voly ihany ny vatana. Ny fitsipiky ny olona mitandrina dia tsy maintsy miala ao an-doha ary hilentika ao amin'ny vatana alohan'ny hahatongavan'ny torimaso. Izay tsy mihetsika fa rehefa mipetraka na mipetraka dia tsy matory. Izay manonofy, na dia somary miala aina ihany aza ny vatany, dia tsy matory. Ny torimaso ho an'ny lehilahy tsotra dia hadino tanteraka ny zava-drehetra.
Ny famantarana voalohany ny filàn'ny torimaso dia ny tsy fahaiza-mitandrina, avy eo tonga ny yawning, tsy manala sorisory na tsy miadana amin'ny vatana. Miondrika ny hozatra, mihidy ny hodi-maso, mivadika ny volom-bolo. Izany dia manondro fa ny foto-kevitra ao an-tsaina dia nametra ny fifehezana ny hozatra mandrindra ny vatana. Ny fitsipiky ny olombelona avy eo dia nanakisaka ny fipetrahany amin'ny vatam-bonika, izany no foiben'ny rafitry ny rafitry ny vatana, raha tsy izany dia ity ivontoerana ity dia reraka loatra ka tsy afaka mankato. Avy eo, raha tsy misy zavatra manintona fahalianana ao an-tsaina, dia avelany ao anaty sezafiandrianana ao anaty vatana misy ny pituitary, ary miala sasatra tanteraka ny rafi-pitatitra.
Raha manadino ny zava-drehetra tonga dia azo lazaina hoe matory, fa raha misy ny fahatsiarovan-tena tsy misy saina, na misy nofinofy hitranga, dia tsy tonga ny torimaso, satria ny foto-pinoana an-tsaina dia mbola eo amin'ny lohany ary noraisin'ny saina manan-danja fa tsy ny tanjona, izay hany esorina mankany amin'ny torimaso.
Amin'ny nofy, ny fotokevitra mahatsiravina dia mifandraika amin'ny fantsom-pitondran-tena izay misy fiantraikany amin'ny maso, sofina, orona ary vava, ary nofinofy ny zavatra mifandray amin'io fahatsapana io. Raha misy ampahany amin'ny vatana voan'ny aretina, marary, na maratra, na asa ametrahana azy, dia mety hihazona ny saina amina saina ary hiteraka nofy izany. Raha misy fanaintainana ao an-tongotra, ohatra, dia misy fiantraikany eo amin'ireo afovoan-doha misy ao amin'ny atidoha, ary mety handatsaka sary manitatra izy ireo alohan'ny fitsipiky ny saina momba ilay ampahany voakasik'izany; na raha mihinana sakafo izay tsy azon'ny vavony ampiasaina, ohatra ny rarebit Welsh dia ho tratran'ny atidoha ary azo atoro an-tsaina ny karazana sary tsy manaitra rehetra. Ny fahatsapana tsirairay dia manana taova voafaritra tsara ao an-doha, ary ny fotokevitra mahatsiravina dia mifandray amin'ireo ivontoerana ireo amin'ny alàlan'ny nerveo mitondra azy, ary amin'ny alàlan'ny fifandraisana eterika. Raha misy miasa amin'ireo taova ireo dia mihazona ny saina ao an-tsaina, ary tsy hatory ny torimaso. Raha misy nofy iray dia ao anaty lohany ny fitsipi-piainana, na nihemotra tamin'io ampahany io amin'ny tadin'ny hazon-damosina izay ao amin'ny havoakan-tranon-jaza. Raha mbola manonofy ny nofinofy mahazatra ny iray, ny fotokevitra mahatsikaritra dia tsy misy lavitra noho ny tadin'ny hazondamosina eo amin'ny tendrony ambony amin'ny vozon'ny tendrony. Raha ny fitsipika mahatalanjona dia avy amin'ny voalohany amin'ny tendren'ny vozon'ny tranonjaza, dia tsy mitsahatra ny manonofy; farany izao dia nanjavona izao tontolo izao sy ny saina ary matory ny torimaso.
Raha vantany vao nesorina tamin'ny fiaramanidina ara-batana ny fitsipiky ny olombelona, ​​ny fantsom-panjanonan'ny tany sy ny hery manodidina dia nanomboka ny asan'izy ireo ny fanamboarana ireo tavy sy ny faritra ao amin'ny vatana. Miala sasatra ny hozatra ary milamina sy miadana ny vatana ary ao ny toerana tokony hatory, ny onja elektrika sy magnetika dia manitsy ary mamerina ny vatana sy ireo taova ao anaty fepetra voalanja.
Misy siansa momba ny torimaso, izay fahalalana ny lalàna mifehy ny vatana amin'ny fifandraisany amin'ny saina. Ireo izay mandà ny lalànan'ny torimaso dia manasazy sazy amin'ny alàlan'ny fahasalamana, aretina, adaladala, na fahafatesana. Ny natiora dia manondro ny fotoana fatoriana ary io fotoana io dia jeren'ny zavaboariny afa-tsy ny olona. Saingy ny olona dia matetika tsy miraharaha io lalàna io toy ny ataony amin'ny hafa, nefa izy manandrana hanaraka ny sitrapony. Ny fifandraisana mirindra eo amin'ny vatana sy ny saina dia avy amin'ny torimaso ara-dalàna. Ny torimaso ara-dalàna dia avy amin'ny havizan'ny vatana voajanahary ary ateraky ny toerana tokony hananana torimaso ary ny toeran'ny saina alohan'ny hatory. Ny sela tsirairay sy ny taova ao amin'ny vatana, ary koa ny tenan'ny tenany ihany, dia polarionina. Ny vatana sasany dia tena tsara eo amin'ny fitondran-tenany, ny hafa kosa ratsy. Araka ny fandaminana ny vatana araka izay toerana mety indrindra amin'ny torimaso.
Ny olona tsirairay, noho izany, dia tsy tokony hanaraka ny fitsipika napetraka, fa tadiavo ny toerana izay tsara indrindra ho an'ny lohany no ipetrahan'ny lohany sy ny ilan'ny vatana itondrany. Ny olona tsirairay dia tokony hahafantatra ireo zavatra ireo ho an'ny tenany avy amin'ny alalàn'ny fizahana sy ny fanadihadian'ny tenany ny tenany. Ireo zavatra ireo dia tsy tokony ho raisina ho fialamboly ary hanadino, fa mijery amin'ny fomba mety sy hiatrehana ny olana rehetra dia tokony: Hankatoavina raha ny traikefa miady, ary nolavina raha tsy mitombina, na raha voaporofo ny mifanohitra amin'izany .
Matetika ny vatana namboarina tsara dia polarionina, ka ny lohany dia tokony hanondro ny avaratra, ary ny tongotra mianatsimo, fa ny traikefa kosa nasehon'izy ireo fa ny olona, ​​mitovy amin'ny salama, dia natory tsara indrindra amin'ny loha ary manondro ny làlana telo hafa.
Mandritra ny torimaso, ny vatana dia tsy mihetsika amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny toerany sy ny haavon'ny magnetika. Matetika dia tsy tsara ny matory mandry eo an-damosina ny olona, ​​satria ny toerana toy izany dia mamela ny vatana misokatra amin'ny fitaoman-dratsy manelingelina maro, kanefa misy kosa ny olona matory tsara rehefa mandry eo an-damosiny. Ary hoy koa izy: tsy tsara ny matory amin'ny ankavia fa satria misy ny tsindry amin'ny fo mitsabaka amin'ny mivezivezy amin'ny rà, mbola betsaka ny te hatory eo amin'ny ilany havia fa tsy mahita fahavoazana azo avy amin'izany. Ny olona misy aretina izay manana ny feon'ny vatany, dia mavesatra ny fanaintainany amin'ny fifohazana maraina. Matetika izany dia matory amin'ny lamosina. Ny vatany, noho izany, dia tokony ho taitra amin'ny hevitra ny hamindra na hanitsy ny tenany mandritra ny alina mankany amin'ny toerana izay hanome azy ho fatiantoka sy fiononana lehibe indrindra.
Ny vola velona roa dia mila mifandraika amin'ireo zava-mitranga amin'ny fifohazana sy matory. Ireo ny angovo momba ny masoandro sy ny maty. Mamofona ny orona iray isaky ny fako. Nandritra ny adiny roa dia eo ho eo ny fofon'aina mandeha amin'ny fofonaany havanana mandritra ny adiny roa eo ho eo ny masoandro ankehitriny. avy eo dia misy fotoana mandanjalanja ny minitra vitsy ary miova ny fofonaina, avy eo dia mitarika ny fofonaina mandalo ny orona ankavanan'ny rivotra ny andiam-bolana. Ireo fantsom-piainana amin'ny alàlan'ny fofonaina dia mitohy mifandimby amin'ny fiainana. Misy heriny amin'ny torimaso izy ireo. Raha misotro ronono dia tonga eo amin'ny orona ankavia, dia ho hita fa ny toerana izay ahafahana matory dia mitoetra eo amin'ny ilany havanana, satria mamela ny fofon'aina mivezivezy tsy misy tohina amin'ny alàlan'ny orona havia. Fa raha, kosa, tokony handry eo amin'ny ilany havia ny iray, dia ho hita fa manova ny ankehitriny; ny rivotra dia tsy hikoriana amin'ny orona havia sy fa mikoriana amin'ny orona havanana. Ny fandefasana ny fofona dia hita fa hitranga eo no ho eo ny fiovana. Raha tsy matory ny olona dia avelao hanova ny toerany eo am-pandriana izy, fa avelao izy handinika ny vatany ho amin'ny fomba mety handainga.
Aorian'ny torimaso mamelombelona, ​​ny tsipika manelanelana ny sela rehetra amin'ny vatana dia mitovitovy. Izany dia mamela ny fantsom-pifandraisana sy magnetika mikoriana amin'ny alàlan'ny sela. Saingy rehefa mihantona ny andro dia manova ny làlan'ireo poloka sela ny eritreritra, ary amin'ny alina dia tsy misy mahazatra ny sela, satria manondro ny lafiny rehetra izy ireo. Ity fanovana ny polisialy ity dia manakana ny fikorianan'ny ranon'ny fiainana, ary raha ny saina kosa mitazona ny fipetrahany eo afovoan'ny rafi-rafi-pitatitra, ny vatana pituitary, io rafi-rafi-pitatitra io dia manakana ny vatana miala voly sy mamela ny sakelidrozotra hampandeha ny cellule . Ilaina àry ny torimaso hamerenan'ny sela ny toerany marina. Ao amin'ny aretina ny sela dia, amin'ny ampahany na manontolo amin'ny vatana, mifanohitra.
Izay maniry matory tsara dia tsy tokony hisotro ronono avy hatrany rehefa avy mametraka fanontaniana, na manao dinika mahaliana, na niditra nifandirana, na rehefa tsy nifangaro, nanelingelina, na nanelingelina zavatra tsy mahaliana ny saina, avy eo hirotsaka an-tsehatra be loatra izy io amin'ny voalohany handà ny famelana ny lohahevitra ary hanakana ny taova sy ny faritra amin'ny vatana tsy hiala sasatra sy hitady fialan-tsasatra. Ny antony iray hafa dia rehefa avy nanala ny lohahevitra nandritra ny fotoana elaela ny saina, dia tena sarotra ny miala aminy, ary be dia be mandritra ny ora maro ny alina, nefa tsy afaka “mandeha matory.” Raha ny saina dia resahina be loatra amin'ny lohahevitra iray, ny lohahevitra hafa tsy tokony hitranga no tokony hampidirina, na ny boky vakiana mandra-pikarihana ilay lohahevitra manintona.
Aorian'ny fisotroan-dronono, raha tsy mbola nifandray tamin'ny toerana tsara indrindra ao am-pandriana ny olona, ​​dia tokony handry eo amin'ny ilany havanana amin'ny toerana mora sy mahazo aina indrindra izy, mampitony ny hozatra ary avelany hianjera amina toerana tena voajanahary ny faritra tsirairay ao amin'ny vatana. Tsy tokony ho tratry ny hatsiaka, ary tsy mafana loatra ny vatana, fa tokony hotehirizina amin'ny hafanana milamina. Avy eo tokony hahatsapa hatsaram-panahy tao am-pony ny olona iray ary hanitatra ny fahatsapana ao amin'ny vatana. Ny faritra rehetra amin'ny vatana dia hamaly sy hiaina amin'ny hafanana sy fahatsapana malala-tanana. Raha ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena dia tsy matory amin'ny torimaso indray avy eo, ny fanandramana maromaro dia mety hisedra ny torimaso.
Iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra hampiasana ny torimaso dia ny fanisana. Raha andrana ity dia tokony hisaina miadana ny tsirairay ary manonona ny isa tsirairay ao an-tsaina mba hahafantarany ny lanjany mifanaraka amin'izany. Izany dia vokatry ny fampangirifiriana ny atidoha amin'ny alàlan'ny monôtô. Rehefa tonga ny dimy amby roapolo amby zato dia efa natory. Ny fomba iray hafa sy ny iray izay tokony hahomby kokoa amin'ny sitrapo matanjaka ary koa ny olona ratsy toetra, dia ny manandrana mijery ambony. Tokony hikatona ny hodi-maso ary nitodika ny masony mba hifantoka amin'ny iray santimetatra eo ambony sy ao ambadiky ny fakan'ny orona. Raha misy afaka manao izany tsara, ny torimaso matetika dia ao anatin'ny minitra vitsivitsy, ary matetika ao anatin'ny telopolo segondra. Ny fiantraikany vokarina amin'ny fanodinana ny masony ho ambony dia ny hanilihana ny taovolo ara-tsaina amin'ny zavamananaina ara-batana. Raha vao mitodika any amin'ny toetra ara-tsaina ny saina dia tsy hita intsony ny vatana. Avy eo nofinofy na torimaso. Fa ny fomba tsara indrindra sy mora indrindra dia ny fahatokisana ny fahaizan'ny olona matory ary miala amin'ny fanelingelenana manelingelina; Izany fahatokiana izany ary miaraka am-pitiavana ao am-po no hatory aorian'ny fotoana fohy.
Misy fisehoan-javatra sasany izay saika matory tsy tapaka. Nihena ny fanehoam-pankasitrahana ary raha tokony ho fofonaina avy any amin'ny faritra kibo, ny olona dia miaina ao amin'ny faritra thoracic. Mihosotra ny daboka ary mihamalemy ny hetsika amin'ny fo. Amin'ny tranga maro dia hita fa misy ny fiovan'ny haben'ny vatana mandritra ny torimaso. Mihamitombo ny habaky ny vatana sasany, fa mihena kosa ny ampahany hafa. Mihamalalaka ny fitateran'ny vatan'ny vatana, raha mihamahia kosa ny lalan'ny atidoha. Manjary marefo ny atidoha ary mifidy mandritra ny torimaso, fa amin'ny fiverenan'ny foto-pisainana mahatsiravina, dia manome loko marevaka kokoa noho ny volon-koditra na loko mena kokoa. Ny hoditra dia mavitrika amin'ny torimaso fa tsy ao amin'ny fanjakana mifoha, izay no antony voalohany mahatonga ny rivotra ao amin'ny efitrano fatoriana ho lasa maloto haingana kokoa noho ny ora mifoha; fa raha mihoson-dra ny hoditra, dia misy atahita ny taova anatiny.
Ny antony fiovan'ny habe amin'ny faritra ao amin'ny vatana dia ny hoe rehefa miverina ao anaty ati-doha ny foto-pinoana, dia mihena ny fihetsiky ny atidoha, mihena ny fivezivezen'ny ra, ary, toy ny taova miasa ny fitsipiky ny saina, miala sasatra ny atidoha amin'izay. Tsy izany amin'ny periphery amin'ny vatana. Ny antony mahatonga izany dia satria ny mpiambina ny vatana, ny foto-pisainana mahatsiravina, dia efa misotro ronono ary mijanona ho miala sasatra ny taova mavitrika, ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena momba ny endriky ny vatana dia miaro sy miaro ny vatana amin'ny loza maro izay Hita izany mandritra ny torimaso.
Noho ireo loza maro ireo dia miha-mihanaka ny hoditra izay mahatonga azy mora kokoa amin'ny fitaomana fa tsy amin'ny fotoana mifoha. Amin'ny toe-javatra fohazana dia mitantana ny vatana ny hozatra sy ny hozatra an-tsitrapo, fa rehefa misotro ronono ny fitsipiky ny maha-olombelona, ​​ary ny rafitry ny rafitry ny moto izay mifehy ireo hozatra an-tsitrapo sy ny fihetsehan'ny vatana dia milamina, ireo taolana tsy azo antoka ary ny hozatry ny vatana dia milalao. Izay no mahatonga ny vatana ao am-pandriana mifindra avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa, tsy misy ny fanampian'ny tsapan'ny olombelona. Ny hozatra mihetsiketsika dia manetsika ny vatana toy ny faneren'ny lalàna voajanahary ary ny fandraisana ny vatana amin'ireo lalàna ireo.
Ny maizina dia mora fehezina amin'ny torimaso satria tsy voan'ny maizina ny hazavan'ny periphery eo amin'ny haizina. Ny hazavana mihetsika eo amin'ny nerve dia manome fahatsapana ao amin'ny atidoha izay mety manome endrika nofy maro, ary ny nofy matetika dia vokatry ny tabataba sasany, na hazavana miketriketrika amin'ny vatana. Ny feo rehetra, hikasika na ivelany ivelany, dia mitondra fiovana lehibe sy ny hafanan'ny ati-doha.
Ny torimaso dia vokatry ny narkotika koa. Tsy mitondra torimaso mahasalama izy ireo, satria mamono ny harary ny narkotika na zava-mahadomelina ary mampiato azy ireo amin'ny fotokevitra mahatsikaritra. Ny zava-mahadomelina dia tsy tokony ampiasaina afa-tsy amin'ny tranga saro-pady.
Ny torimaso ampy tokony homena ny vatana. Ny isan'ny ora dia tsy voafetra miaraka tsara. Indraindray isika mahatsapa aina kokoa rehefa avy natory adin'ny efatra na dimy ora noho ny ataontsika indraindray amin'ny isa indroa. Ny hany fitsipika izay mety harahina amin'ny halavan'ny torimaso dia ny misotro ronono amin'ny ora maraina sy matory aloha mandra-pahafatin'ny vatana ny tenany. Mahita soa aman-tsara ny matory amin'ny fandriana. Ny fotoana tsara indrindra amin'ny torimaso kosa dia ny adiny valo amin'ny folo ka hatramin'ny hariva ka hatramin'ny enina maraina. Tamin'ny folo teo ho eo, ny onjan'izao tontolo izao dia manomboka milalao ary maharitra efatra ora. Mandritra io vanim-potoana io, ary indrindra amin'ny roa ora voalohany, ny vatana dia mora amin'ny ankehitriny ary mahazo tombony lehibe indrindra avy amin'izany. Amin'ny roa ora maraina dia manomboka manomboka milalao izay manome fiainana ny aina. Mitohy mandritra ny efatra ora eo ho eo ity fihetsehana ity, ka raha nanomboka natory tamin'ny folo ora alina ny torimaso, dia efa nandry feizay ny sela rehetra sy ny ampahany amin'ny vatana ary nandro tamin'ny lozisialy ratsy ratsy; amin'ny roa izao ny herin'ny herinaratra dia hanomboka hamelombelona sy hamelombelona ny vatana, ary amin'ny enina ora dia ho voaasa sy hatanjaka ny sela amin'ny vatana raha manainga ny hetsika ary miantso ny tenany mba hisarika ny saina amin'ny fitsipiky ny saina .
Tsy matory ny torimaso sy ny tsy fitanana amin'ny alàlan'ny torimaso, satria raha mihetsika ny vatana ary mifehy sy mifehy azy ireo ary ny hozatra an-tsitrapo, ny natiora dia tsy afaka manala sy manaisotra ireo fako, ary tsy manamboatra ny fahasimbana vita amin'ny vatana amin'ny fanaovana ny fiainana mavitrika. Izany dia azo atao raha tsy ny fitrandrahana ny hozatra sy ny hozatra dia tsy mahafehy ny vatana ary mifehy ny tsindry voajanahary.
Ny torimaso be loatra dia ratsy ho an'ny tsy ampy torimaso. Ireo izay matory amin'ny torimaso loatra dia mazàna ary malaina saina sy olona kamo, tsy mahalala saina, na gormaly izay matory amin'ny torimaso sy misakafo. Ny saina malemy dia mora reraka ary ny monotony rehetra dia hitaomana ny hatory. Ireo izay matory be loatra dia manimba ny tenany, satria ny torimaso tafahoatra dia miaraka amin'ny tsy fahatsiarovan'ny lohan'ny taova sy ny taolan'ny vatana. Izany dia mitarika amin'ny fihoaram-pefy, ary mety hiteraka voka-dratsy lehibe. Mahatonga ny fijanonana ny hetsika ny sakamalaho, ary mandritra ny fanalefahana ny halavany ny tsiranoka entiny. Ny torimaso tafahoatra, amin'ny fihoaram-peo ny lakandranon'ilay tsiranoka alimentary dia maniry ny hananganana constipation.
Na dia maro aza ny mihevitra fa manonofy mandritra ny fotoana fatoriany manontolo, dia tsy fahita firy izany, ary raha izany dia mifoha reraka izy ireo ary tsy afa-po. Miaraka amin'ireo matory tsara dia misy fotoana roa. Ny voalohany dia rehefa milentika ny aretin-tsaina sy ny saina manavesatra; matetika dia maharitra hatramin'ny segondra vitsy ka hatramin'ny iray ora. Ny vanim-potoana faharoa dia ny fanairana, izany hoe, ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, manomboka amin'ny segondra vitsy ka hatramin'ny antsasak'adiny. Ny halavan'ny nofy tsy misy dikany ilazana ny fotoana lanin'ny fotoana, satria ny fotoana amin'ny nofy dia hafa tanteraka amin'ny fotoana araka ny fantatsika amin'ny toe-javatra mifoha. Betsaka ny nahita ny nofy izay tao anatin'ny nofy dia naharitra an-taonany na fotoana niainany na taona maro nolalovany, izay ahitana sivilizasiona noheverina hiakatra sy hianjera, ary ny mpanonofy dia tena nisy tokoa fa tsy azo hisalasalana, fa rehefa taitra izy dia nahita fa ny taona na segondra vitsy na minitra vitsy monja.
Ny antony tsy fanarahan-dalàna ny halavan'ny nofy araka ny fahafantarantsika azy, dia noho ny fahatsapanay ny foto-kevitry ny fijerintsika momba ny fahazarana hanombanana ny halavirana sy ny fotoana. Ny fitsipi-pinoana miasa ao amin'ny tontolo mahery vaika dia mahatsikaritra fa tsy misy fetrany, fa ny taova ataontsika dia manombatsefy fotoana sy elanelana amin'ny alàlan'ny mivezivezy amin'ny ra, ary ny mivezivezy amin'ny tsiranoka manelingelina, satria efa nampiasaina tamin'ny tontolo ivelany. Ny nofy dia ny fanesorana ny foto-pisainana tsy fahatsiarovan-tena amin'ny fiasan'ny taova ara-batana ivelan'ny fiaramanidina ara-batana mankany amin'ny asany amin'ny alàlan'ny taova ao anaty fiaramanidina ara-tsaina. Ny fizotrany sy ny andalana dia mety ho jeren'ny fitsipiky ny saina rehefa nianatra ny fomba hanavahana ny tenany amin'ny taova sy ny sain'ny vatana.
Ny vatana amin'ny fitambarany dia iray ihany, fa amina vatana maro, izay samy tsy mitovy amin'ny an'ny hafa. Misy ny atody atomika izay ametrahana ny vatana manontolo, fa natambatra arakaraka ny fitsipiky ny famolavolana. Vatana tsy hita maso izy io. Avy eo dia misy ny vatana molekiola, izay foto-kevitra famoronana astral, izay atambanan'ny atoma ary manome endrika ny vatana manontolo. Avy eo dia misy ny aina mahavelona, ​​izay vatana ara-tsaina izay mibontsina amin'ny vatan'ny molekiola. Ny iray hafa koa dia ny vatana faniriana izay vatana voajanahary tsy hita izay mameno ny vatana rehetra. Ho fanampin'ireto dia misy ny fisainana ara-tsaina, izay toy ny hazavana mamirapiratra ary mandalo amin'ireo rehetra efa voatonona teo.
Ankehitriny rehefa mihetsika amin'ny alàlan'ny tsapan'ny saina ny foto-kevitra na ny saina ara-tsaina, toy ny hazavana iray dia mamirapiratra amin'ny hazavana rehetra izy ireo ary mamirapiratra sy manentana azy ireo sy ny saina ary ny taova hihetsika. Ao anatin'izany fanjakana izany dia voalaza fa mifoha. Rehefa navadika nandritra ny fotoana maharitra ny vatan'ny saina, ny vatana ambany rehetra dia resin'ny hazavana ary tsy afaka mamaly. Mandraka ankehitriny dia nanjary haingam-pandeha ireo vatan'ny saina ary lasa mihena izy ireo ary mitodika any amin'ny vatana ara-tsaina simika ny vatana maivana izay seza ao anaty ara-tsaina ivelany ary mirakitra ny fahatsapana ny fiaramanidina ara-tsaina. Avy eo isika manonofy ary ny nofy dia maro karazana toy ny misy finiavana; ary ny nofy nipoitra dia antony maro no nahatonga azy.
Ny antony mahatonga ny nofy ratsy indraindray dia noho ny tsy fahaizan'ny fitaovana fandevonan-kanina no miasa, ary ny fironana hanipy sary mihoa-pampana eo amin'ny ati-doha, izay hitan'ny fitsipiky ny saina; Ny nofy ratsy dia mety ho vokatry ny fijanonan'ny mivezivezy amin'ny ra na ny rafitry ny rafitry ny rafi-pitatitra na ny fanesorana ireo lalan-dratsin'ny môtô. Io fahatapahana io dia mety hateraky ny fihanaky ny tavy na amin'ny fanesorana azy ireo. Ny antony iray hafa dia incubus izay maka ny vatana. Tsy nofinofy vokatry ny indigestion na fikorontanana mihintsy io, fa manana toetra manjary izany ary tokony hitandrina aloha ny fahatongavan-tsaina, fa raha tsy fahaizan'ny adala, ary fantatra fa ny nofinofy toa izany indraindray dia niteraka ny fahafatesana.
Matetika ny Somnambulistes dia toa mampiasa ny saina sy ny fahaizan'ny fiainana mifohaza, ary indraindray dia maneho fahatsorana tsy hita eo amin'ny fiainana mifoha amin'ny somnambulista. Nisy somnambuliste mety hipoitra avy eo am-pandriany, fitafy, lambany ny soavaly ary mitaingina feno fahatezerana eny amin'ireo toerana izay tsy hahatongavany handeha; na azon-diany miakatra moramora eny an-tampon-tany na any an-tampon'ny havoana misy hadalana ho azy raha mifoha raha mifoha; na mety hanoratra taratasy izy ary handray anjara amin'ny resaka, nefa na dia mifoha aza dia tsy fantatra ny zava-nitranga. Ny antony mahatonga ny somnambulism dia matetika mifehy amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny saina mifandrindra amin'ny endriky ny vatana izay ihetsiketsika ny hozatra sy ny hozatra tsy mihetsika, tsy misy fitsabahana ny fitsipiky ny saina. Io hetsika somnambulistika io dia fiantraikany iray. Ny anton'izany dia noho ny fomba fiasa sasany izay efa nitranga teo aloha, na tao an-tsain'ilay mpilalao na nasain'ny sain'olon-kafa izany.
Somnambulism dia endrika hypnosis, mazàna mitana ny eritreritra sasany izay nanaitra ny fitsipiky ny endrik'ilay vatana, toy ny hoe rehefa mieritreritra ny hanao zavatra na zavatra iray ny fisainany ireo hevitra ireo amin'ny famolavolana na endrika fitsipiky ny vatany . Izao rehefa nanaitra ny fitsipiky ny endriny ny olona iray ary efa misotro ronono mandritra ny alina, ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena dia miala amin'ny fipetrahany sy afovoany ao amin'ny ati-doha ary ireo taolana sy ny hozatra an-tsitrapo dia miala voly. Avy eo dia ny andraikitra sy ny hozatra tsy mandray andraikitra no miandraikitra. Raha toa ka voatosika tsara avy amin'ny fahatsapana voarain'ny fitsipika fisainana izany, amin'ny fotoana fohazana, mankatò azy ireo avy hatrany ireo eritreritra na fahatsapana ireo raha toa ka mankatò ny mpamatsy azy ilay lohahevitra hypnotized. Noho izany, ny feom-borona ataon'ilay somnambulistana matetika dia manatanteraka nofinofy iray ao anaty vatan-doha mandritra ny fotoana fohazana, mampiseho fa ny somnambulistana dia resaka hypnose-ny tena.
Saingy io valalan-tena io dia tsy vokatry ny nofinofy isan'andro, na fofom-borona, na fiheverana mifoha fiainana fotsiny. Indraindray ilay fitsipika mahatsiahy dia ao anatin'ny iray amin'ireo nofinofy lalina ary mamindra ny fahatsapana an'izany fofona lalina izany amin'ny fitsipika mandrindra ny vatana endrika. Avy eo, raha manao io fihetsika io ny vatany, ny fisehoan'ny somnambulisme dia aseho amin'ny fampisehoana sarotra sy sarotra indrindra, toy ireo mitaky fandidiana ara-tsaina amin'ny kajy matematika. Ireo no antony iray mahatonga ny somnambulism, fa misy antony maro hafa, toy ny toetra roa, ny fijery, na ny fankatoavana ny sitrapon'ny hafa izay amin'ny alalàn'ny hypnotisma dia mitarika ny vatan'ny somnambuliste amin'ny hetsika fanaony.
Ny hypnose dia endrika fatoriana iray entin'ny sitrapon'ny olona iray mihetsika ao an-tsain'ny hafa. Ny toe-javatra mitovy amin'izany izay miteraka amin'ny torimaso voajanahary dia novokarin'ny mpino hypnotista. Maro ny fomba narahin'ny hypnotista, fa ny vokatra dia mitovy. Amin'ny hipnosis, ny mpandraharaha dia miteraka reraka amin'ny hodi-maso, fahatoniana ankapobeny, ary amin'ny alàlan'ny soso-kevitra, na amin'ny alàlan'ny fifehezana dia manery ny fitsipiky ny loha hevitra hiala hiala amin'ny seza sy afovoany ao amin'ny ati-doha izy, ary noho izany dia mifehy ireo rantsambatana tsy ankasitrahana. ary ny hozatry ny vatana dia nitolo-batana, ary ny fotokevitra mahatsiravina dia esorina avy amin'ireo ivony ara-tsaina sy ny foiben'ny fahatsapana, ary matory ao anaty torimaso lalina. Avy eo maka ny toeran'ny saina ny mpandraharaha ary manosika ny hetsiky ny endrika fototry ny vatana izay mifehy ny hetsika tsy fandraisana andraikitra. Ity fitsipika fitsipika ity dia mamaly amin'ny eritreritry ny mpandraharaha raha toa ka tsara ny lohahevitra, ary ny sain'ny mpandraharaha dia ny fiara automatique iray avy amin'ny sain'ny azy manokana.
Ny lohahevitra hypnotized dia mety hampiseho ireo fisehoan-javatra somnambulism ary mety hamboarina hanaovana feom-paharetana mahafinaritra mahafinaritra kokoa noho ny hypnotista dia mety mamorona fety toy ny sitrapony ny hanatontosana ny foto-kevitra, fa raha ny fihetsehan'ny somnambulista dia miankina amin'ny fisainana teo aloha. na inona na inona izany. Ny olona iray dia tokony tsy ho eo ambanin'ny toe-javatra na ny toe-javatra tokony hampidina, mba hanehoana azy sy ny vatany ho toy ny fitaomana rehetra.
Azo atao ny mahazo tombony amin'ny hypnose-tena raha toa ka atao am-tsaina. Amin'ny alàlan'ny baiko ny vatana hanatanteraka asa sasany dia ho voatazona tsara kokoa eo ambanin'ny fahefan'ny tena manokana, ary ho mora kokoa amin'ny foto-kevitra fanjohianana hitarika ny asan'ny olona iray amin'ny fiainana sy ny vatana raha toa ka voaofana tsara ny vatana mba hamaliana azy. amin'ny foto-pisainan'ny saina amin'ny fotoana rehetra. Ny iray amin'ireo fiasa toy izany dia mifoha amin'ny maraina, izay nampitan'ny saina ny vatana mba hamoha alohan'ny hisotroana, ary raha vao mifoha dia mifoha sy mandro sy miakanjo. Izany dia azo tanterahina lavitra amin'ny alàlan'ny fitarihana ny vatana hanatontosa andraikitra sasany amin'ny andro sasany. Lehibe ny saha ho an'ny fanandramana toy izany ary azo tsidihina kokoa ny vatana raha omena alohan'ny alina alohan'ny hatory ireo baiko ireo.
Mahazo tombontsoa betsaka amin'ny torimaso izahay, fa misy ihany koa ny loza.
Eo ny loza ateraky ny fahaverezan'ny aina mandritra ny torimaso. Mety ho lasa sakana goavana ho an'ireo izay miezaka hanana fiainana ara-panahy izy io, saingy tsy maintsy arahana sy resena. Rehefa notazonina mandritra ny fe-potoana iray ny fahadiovam-pitondran-tena dia lasa zavatra manintona olona amina kilasy maro sy fitarihan'ny tontolo tsy hita maso ny vatana. Ireo dia manatona ny vatana amin'ny alina ary amin'ny torimaso dia mihetsika amin'ny fotokevitra mandrindra ny vatana endrika, izay mifehy ireo hozatra sy ny hozatry ny vatana. Amin'ny alàlan'ny fiheverana ny fitsipiky ny vatana io, ny foibe organika dia mamoha sy manentana ary arahan'ny valiny tsy mendrika. Ny fahaverezan'ny maha-aina dia azo ajanona tsara sy ny fitaomana mitarika azy hanakana ny fanatonana azy. Izay mahatsiaro mandritra ny torimason'ny vatana dia mazava ho azy, manalavitra ny fitaomana sy enti-manana izany rehetra izany, fa izay tsy mahalala kosa dia afaka miaro ny tenany ihany.
Ny fahaverezan'ny fahavoazana dia matetika ny vokatry ny eritreritry ny tenanao mandritra ny fifohazana, na ireo hevitra tonga ao an-tsainy sy izay omeny ny mpihaino. Ireo dia manaitra ny fitsipiky ny fandrindrana ary, toy ny vatan'ny somnambulistika, dia mandeha ho azy avy hatrany ny fipetraky ny eritreritra izay nampiavaka azy. Avelao izy hiaro ny tenany amin'ny torimaso mba hitandrina saina madio amin'ny andro mifoha. Raha tokony hampiantrano ny eritreritra tonga ao an-tsainy, na mety hanoloran'ny hafa azy izy, dia avelao izy handao azy, hanohitra ny mpihaino ary handà ny hiseho azy ireo. Ity no iray amin'ny fanampiana tsara indrindra sy hanentanana ny torimaso mahasoa sy mahasoa. Ny fahaverezan'ny tanjaka indraindray dia noho ny antony hafa noho ny fiheveran'ny hafa na ny hevitry ny hafa. Azo sorohina izany, na dia mila fotoana aza. Avelao ny olona ory izay mangataka ny vatany hiantso azy rehefa misy loza manakaiky, ary avelao koa izy handidy ny foto-pisainany hampandrenesana olona mpitsidika tsy te hialoha lalana; ary tsy maintsy miala izany raha omena ny baiko mety. Raha misy olona mankasitraka hiseho amin'ny nofy dia tokony hanontany izy hoe: "Iza ianao?" Ary "Inona no tadiavinao?" Raha manontaniana an-keriny ireo fanontaniana ireo dia tsy misy vondrona afaka mandà ny famaliana ary hampahafantatra ny tenany sy ny tanjony. Rehefa manontaniana ny mpitsidika ireo fanontaniana ireo, ny endriny tsara tarehy dia matetika manome endrika endrika miafina indrindra, izay tezitra ka voatery nanery azy haneho ny tena toetrany, ny oram-panala na ny tsikombakomba ary hanjavona tsy an-tsitrapo.
Rehefa avy nametraka ny saina tamin'ny zava-misy etsy ambony, sy mba hisorohana ny loza mitovy amin'ny torimaso, ny olona iray rehefa misotro ronono dia tokony hanana fahatsaram-panahy tsara ao am-po ary manitatra izany amin'ny vatana manontolo mandra-pahazoan'ny hafanana mahafinaritra ny sela. Araka izany dia mihetsika avy amin'ny vatana, miaraka amin'ny vatana ho ivony, avelao izy haka sary an-tsaina ny tontolo manodidina mba hotsimbinina amin'ny fiheverana tsara ny toetra tsara, izay mipoitra avy aminy ary mameno ny faritra rehetra ao amin'ny efitrano, toy ny hazavana izay mamirapiratra avy amin'ny tontolon'ny herinaratra. Io no ho tontolo iainany, izay ahodidiny azy sy izay mety hatoriany tsy hisy loza hafa. Ny hany loza manjo azy avy eo dia ny eritreritra izay ananan'ny sainy. Mazava ho azy fa tsy tongatonga ho azy izany toe-javatra izany. Vokatry ny ezaka mitohy izany: ny fifehezana ny vatana sy ny fifehezana ny saina.
Misy zodiaka matory ary misy zodiaka mifoha. Ny zodiak amin'ny fiainana mifoha dia avy amin'ny homamiadana (♋︎) ka hatramin'ny capricorn (♑︎) amin'ny fomba libra (♎︎). Ny zodiaka amin'ny torimaso dia avy amin'ny capricorn (♑︎) hatramin'ny homamiadana (♋︎) amin'ny aries (a). Ny zodiakon'ny fiainana mifoha dia manomboka amin'ny homamiadana (♋︎), fofonaina, miaraka amin'ny famantarana voalohany ny fahatakarantsika. Izy io no fialana voalohany amin'ny toeran'ny torimaso lalina amin'ny maraina na aorian'ny fialan-tsasatra isan'andro. Amin'ity toe-javatra ity, tsy dia mahalala ny endriny na ny antsipiriany momba ny fiainana mifoha ny olona iray. Ny hany zavatra fantatry ny olona dia toe-tsaina milamina. Miaraka amin'ny lehilahy ara-dalàna dia tena fitsaharana tokoa izany. Avy eo, ny foto-kevitra fisaintsainana dia mizotra mankany amin'ny toe-tsaina misaintsaina kokoa, izay asehon'ny famantarana leo (♌︎), fiainana. Eto amin'ity fanjakana ity ny loko na ny zavatra mamirapiratra dia hita ary tsapa ny fahatsiarovana sy ny fidiran'ny fiainana, fa mazàna nefa tsy misy famaritana endrika. Rehefa mamerina ny fifandraisany amin'ny toe-batana ny saina dia miditra ao amin'ny famantarana virgo (♍︎). Ao anatin'io toe-javatra io dia manonofy ny ankamaroan'ny olona ny fiverenany amin'ny fiainana mifoha. Hita eto ny endri-javatra, jerena ny fahatsiarovana taloha ary ny fahatsapana izay manohina ny mason'ny vatana no mahatonga ny sary atsipy ao amin'ny eteran'ny ati-doha; avy amin'ny toerany no jerenin'ny saina ireo fahatsapana sy soso-kevitra ao amin'ny eritreritra ary mandika azy ireo amin'ny nofy rehetra. Avy amin'ity nofinofy ity dia misy dingana iray hamohazana ny fiainana, avy eo, ny saina dia mifoha amin'ny onjan'ny vatany ao amin'ny sign libra (♎︎), firaisana ara-nofo. Ao amin'io famantarana io dia mandalo ny hetsika rehetra amin'ny fiainana andavan'andro. Aorian'ny famohazana ny vatany amin'ny mariky ny libra (♎︎), ny firaisana ara-nofo, ny faniriana dia miharihary amin'ny alàlan'ny famantarana scorpio (♏︎). Ireo dia mifandray ary mihetsika amin'ny eritreritra mahazatra amin'ny famohazana ny fiainana, ao amin'ny famantarana sagittary (♐︎), eritreritra, izay mitohy mandritry ny andro ary mandrapahatonga tsy mihetsika intsony ny fitsipiky ny saina. izao tontolo izao. Izany dia mitranga amin'ny famantarana capricorn (♑︎), ny maha-olona. Capricorn (♑︎) dia maneho ny toeran'ny torimaso lalina ary eo amin'ilay fiaramanidina mitovy amin'ny homamiadana (♋︎). Saingy ny capricorn (♑︎) dia maneho ny fandehanana amin'ny torimaso lalina, ny homamiadana (♋︎) no maneho ny fivoahany.
Ny zodiaka natory dia avy amin'ny capricorn (♑︎) ka hatramin'ny homamiadana (♋︎) amin'ny aries (a). Izy io dia maneho ny tontolon'ny torimaso tsy voafandrika, satria ny antsasaky ny zodiaka dia maneho ny fisehoana an'izao tontolo izao mamoha ny aina mifoha. Raha misy olona mandalo an'io fanjakana tsy voamarina io taorian'ny fisotroan-dronono dia velombelona indray amin'ny fifohazana satria ao anatin'ny toeran'ny torimaso lalina izany, raha mandalo amin'ny fomba milamina, dia mifandraika amin'ny toetra ambony sy fahaizan'ny fanahy izy ary mandray fampianarana amin'ny alàlan'ny ahafahany mandray ny asa amin'ny andro ho avy miaraka amin'ny tanjaka vaovao sy ny fifaliana ary manavakavaka sy hentitra izy.
Ny zodiaka amin'ny torimaso dia fanjakana noumenal; ilay zodiaka mifoha dia maneho ny tontolo mampino. Ao anatin'ny zodiaky ny torimaso tsy afaka mandalo mihoatra ny famantarana capricorn na ny torimaso lalina ny toetra, raha tsy izany dia hijanona ny maha-olona azy. Mijanona ao anaty faribolana mandrapaha vao mifoha ao amin'ny homamiadana (♋︎) izy io. Ny maha-olona azy avy eo dia mandray ny tombony azo avy amin'ny zodiakon'ny torimaso rehefa mihena ny toetra. Ny maha-olona azy avy eo dia manainga ny toetra tsirairay ny tombontsoa mety ho azony.
Iray izay hianatra momba ny zodiak amin'ny fifohazana sy matory, isika dia manondro ireo sary nampidirina matetika The Teny. jereo The Teny, Vol. 4, No. 6, martsa 1907, ary Vol. 5, No. 1, aprily 1907. Sary 30 ary 32 tokony hosaintsainina, satria hanolotra ireo karazana maro sy halehan'ny torimaso sy torimaso mandalo tsirairay izy ireo, arakaraka ny fahaizany, ny toe-javatra sy ny karma. Amin'ireo isa roa ireo dia maneho efatra lehilahy, ny telo amin'ireo lehilahy ao anaty lehilahy lehibe kokoa. Nampiharina tamin'ny lohahevitra tamin'ity taratasy ity, ireto lehilahy efatra ireto dia maneho ny fanjakana efatra izay nandalo tamin'ny famohaana ka hatramin'ny torimaso lalina. Ny lehilahy kely sy voalohany dia ny vatana, mijoro amin'ny libra (♎︎), izay voafetra amin'ny vatany ho amin'ny fiaramanidina virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎), endrika sy faniriana, ilay zodiak lehibe. Ny isa faharoa dia ny lehilahy eo amin'ny saina ara-tsaina, ao anatiny no misy ilay lehilahy maha-olona. Ity lehilahy ara-tsaina ity dia maneho ny toeran'ny nofinofy mahazatra. Ity fanjakana nofinofy tsotra ity, ary koa ny lehilahy psyklika, dia voafetra amin'ny famantarana ireo feo-sagittary (♌︎ – ♐︎) an'ny olona ara-panahy, ary ny famantarana ny homamiadana-capricorn (♋︎ – ♑︎), ary eo amin'ny lehilahy ity tontolon'ny tontolon'ny ara-tsaina izay miasa ny olon-tsotra amin'ny nofy. Eto amin'ity fanjakana ity, ny linga sharira, izay endrika na vatan'ny vatana, dia ny vatana izay ampiasaina ary iankinan'ny nofy. Ireo izay nanana traikefa amin'ny nofy dia manaiky ity fanjakana ity ho toy ny hoe tsy misy hazavana na loko isan-karazany. Ny endrika dia hita ary tsapa ny faniriana, fa ny tsy misy ny loko ary toa hita ho ny iray hue ny endriny, izay malefaka endrika volo. Ireo nofy ireo dia matetika atolotry ny eritreritra tamin'ny andro teo aloha na amin'ny fahatsapana ho an'ny vatana amin'ny fotoana. Ny tena nofinofy araka izany, dia asehon'ny zavatra ananantsika, ao amin'ireo lahatsoratra voalaza etsy ambony, ilay antsoina hoe olona manana ny toe-tsaina. Ny lehilahy ara-tsaina ao amin'ny zodiaka ara-tsaina dia ahitana ny lehilahy ara-tsaina sy ara-batana amin'ny zodiak'izy ireo avy. Ny olona ara-tsaina ao amin'ny zodiakany dia tonga hatrany amin'ny fiaramanidina leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), foto-piainana, ilay zodiakola lehibe. Izy io dia eo amin'ny sainan'ny homamiadana-capricorn (♋︎ – ♑︎) ny zodiaka ara-panahy, voafatotry ny afovoan-olombelona. Io lehilahy ara-tsaina io dia mampiditra sy mametra ny fizotran'ny fiainana nofinofisin'ny olon-tsotra. Ao anatin'ny toe-javatra miavaka fotsiny no ahazoan'ny olona mifandray amin'ny saina ara-panahy. Ity lehilahy ara-tsaina ity no tena nofinofy marina. Tena tsy manam-petra eo amin'ny olon-tsotra, ary tsy voafehy amin'ny fiainany mifohaza, sarotra ho azy ny miasa ao an-tsaina sy am-tsaina, fa ny vatana no nandalovany ny fotoan'ny lanitra aorian'ny nahafatesany.
Amin'ny alalàn'ny tarehimarika 30 ary 32, dia ho hita fa ny zoro lalana ankavanana miovaova dia mihatra amin'ny zodiaka rehetra, samy araka ny karazany avy, fa ny andalana (♋︎ – ♎︎) sy (♎︎-♑︎) dia mandalo ny zodiaka amin'ny marika mitovy. Ireo andalana ireo dia mampiseho ny fifandraisan'ny fiainana fohazina sy ny fialany, ny fidirana ao amin'ny vatana sy ny fandaozan'ny azy. Ireo tarehimarika ireo dia manome soso-kevitra betsaka kokoa noho ny azy ireo.
Izay hahazo tombony amin'ny torimaso — izay tombontsoa dia hisy fiantraikany amin'ny androm-piainany, dia hialana amin'ny dimy ambin'ny folo minitra ka hatramin'ny adiny iray. Ho an'ny lehilahy mpandraharaha dia toa fotoana kely fotsiny ny misaintsaina, ny hipetrahan-dresaka na dia dimy ambin'ny folo minitra aza dia ho fanitarana, saingy io lehilahy io dia nieritreritra dimy ambinifolo minitra na adiny iray tao amin'ny teatra tsy ela akory fialamboly hariva.
Mety hahazo traikefa amin'ny fisaintsainana ny olona iray mankafy ny zavatra tiany ao amin'ny teatra, satria ny masoandro dia mamirapiratra ny jiro mirehitra fanaovan-jiro. Rehefa misaintsaina ianao, tokony ho dimy minitra na adiny iray, avelao ny olona hamerina hanameloka ny asa ratsiny tamin'iny andro iny, ary mandrara ny zavatra hafa na zavatra hafa toy ny ampitso, fa avelao izy hankasitraka ireo zavatra efa natao tsara. Avelao izy hitarika ny vatany sy ny fitsipiky ny endriny momba ny fitehirizana ny tenany mandritra ny alina. Avelao koa izy handinika hoe inona ny sainy, ary ny tenany ho toy ny fitsipika ampahafantarina azy. Fa aoka izy hamantatra sy hanapa-kevitra ihany koa hahatsiaro tena mandritra ny nofiny ary amin'ny torimasony; ary amin'ny zava-drehetra, dia avelao izy hamantatra fa tsy mitsahatra ny mahatakatra, amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena, ary amin'ny alàlan'ny alàlan'ny foto-keviny izay hahitana azy - fahatsiarovan-tena.